Nidina tamin'ny fomba ofisialy Pokémon GO | Androidsis
Mitondra a herinandron'ny hadalana tena izy Miaraka amin'ny fahamaroan'ny zava-baovao, vaovao sy tantara mifandraika amin'ity lalao video ity izay afaka nanjary tranga ara-tsosialy, namoaka ny olona hiala ny tranony ary nanjary lalao lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny lalao video tany Etazonia, indrindra ho an'ny fanitarana haingana. Ankehitriny dia tsy maintsy ho hitantsika ny fomba fivelarana any amin'ny firenena maro, raha omaly no nahalalantsika fa tonga hatrany Eropa rehefa miantsona any Alemana sy UK.
Hita any Espana izy io ankehitriny afaka mandeha mamaky ny Google Play Store ianao ho alaina. Amin'izany no ahafahanao manadino ny mitady ny APK ary miditra amin'ireo fanavaozam-baovao avy amin'ny fiarovana izay tiana holazaina amin'ny Google app sy ny fivarotana lalao video.
1 Pokémon GO efa any Espana
2 Fa inona ny Pokémon GO?
Pokémon GO efa any Espana
Raha izao hiparitaka ny tazo amin'ity lalao ity toy ny sombin-javatra manerana ny saikinosy. Hitsidika ireo morontsiraka sy toerana fialan-tsasatra ireo izy mba hitsambikin'ireo mpandroba rehetra ireo miaraka amin'ny finday avo lenta hihaza ireo Pokémon ireo manerana ny toerana. Tranga iray ara-tsosialy izay vao nanatri-maso ny zava-nitranga tany amin'ireo firenena toa an'i Etazonia, dia misy ny tebiteby satria horaisin'izy ireo amin'ireo faritra ireo.
Ny zavatra tsara indrindra momba izany dia misy amin'izao fotoana izao eto amintsika dia izany tsy mila mampiasa APKs intsony isika hahafahana manavao azy io, satria mbola maro ireo mpampiasa tsy sahy mametraka azy ireo amin'ity làlana ity, ary aleony mandeha mamaky ny Google Play Store amin'ny fisintomana sy fanavaozana.
Lalao video izay azontsika lazaina saika hanamarihana ny sisa tavela amin'ny taona ary rehefa mandeha ny taona ary miverina amin'ny tantara isika dia efa hanana ny toerany io, ka miverina amin'ny apetraho ao amin'ny spotlight i Nintendo mifandraika amin'ny lalao video sy ny fahafahany manolotra zavatra hafa amin'ny fialam-boly sy ny fialamboly, toy ny nataon'i Super Mario sy ireo tarehintsoratra izay fantatry ny rehetra rehetra.
Fa inona ny Pokémon GO?
Pokémon GO dia mametraka anao amin'ny toeran'ny lasa mpanazatra Pokémon feno fa tsy maintsy mandeha mihaza amin'ny finday avo lenta amin'ny alàlan'ny arabe ianao. Mampiasa zava-misy marina izy io, amin'ny alàlan'ny fakantsary findainao dia azonao atao ny mitady an'io Pokémon io izay manohitra anao hihaza azy amin'ny pokéball, ny fitaovam-piadiana tsara indrindra mba hahafahanao mitahiry azy ao anaty kitaponao sy manohy mihaza.
Rehefa mitrandraka amin'ny Pokémon GO ianao dia afaka tadiavo ny poképaradas, mifandraika matetika amin'ireo tsangambato ara-tantara sy toerana manandanja ao an-tanànanao na tanànanao, izay ahafahanao mahazo zavatra maimaim-poana toy ny pokéball bebe kokoa na karazana fanampiana hafa. Ireo elanelam-potoana itodihan'ny mpilalao maro ireo fanampiana maimaim-poana izay azo raisina amin'ny micropayments.
Farany afaka hihaona ianao ny gym, izay no toerana tsy maintsy hiadivanao rehefa tonga amin'ny ambaratonga 5. Afaka misafidy ianao amin'ny fandraisana anjara amin'ny ekipa mavo, manga na mena. Tsy misy fahasamihafana eo amin'izy telo, efa raharahan'ny namanao ny manatevin-daharana ny iray amin'ireo gym na aiza no tokony hamelanao ny iray amin'ireo Pokémon tsara indrindra mba hiarovana ny gym amin'ny fanafihan'ny ekipa hafa.
Avy amin'ny fampiharana mitovy azonao atao ampitomboy ny Pokémon na atakalo zavatra. Lalao video noforonin'i Nintendo sy Niantic Labs, ary nampiasa ny Ingress hanana fototra tonga lafatra amin'ny famoahana ny Pokémon GO mba ho afaka ho lasa trangam-piarahamonina.
Eto ianao mpitari-dalana lalao kely, Eto toro-hevitra roa hanamaivanana ny fanjifana bateria be loatra inona no antony ao amin'ny terminal ary ato amin'ity lahatsoratra ity misy tolo-kevitra vitsivitsy for mampihena ny fanjifana data amin'ny sarany isam-bolana.
Finalmente efa ananantsika any Espana izany, ka manomboka miely ny tazo Pokémon GO.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Pokémon GO dia misy any Espana izao
Huawei dia nanambara ny Maimang 5 miaraka amin'ny seho 5,5p 1080 ", puce Snapdragon 625 ary RAM 4GB